प्रहरीमाथि हात’पात गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा कपडा खोलेर ना’ङ्गै भएपछी….
August 30, 2020 900
प्रहरी माथि हातपात गर्ने एक ज’नालाई शुक्लाफाँटा नगरपालिका १० झलारी बजारबाट प्रहरीले गत बिहीबार प’क्राउ गरेको छ ।
पक्रा’उ पर्नेमा महाकाली नगरपालिका ७ दोधाराका विरेन्द्र बोगटी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्र’हरी निरिक्षक धर्मेन्द्र राव’लले बताए । डयुटीमा रहे’का प्रहरी माथि हात’पात गर्ने बोगटीलाई नि’यन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धानको कार्य भैरहे’को उनले बताए ।
बेदकोट नगरपालि’काको दैजीमा बोगटीले स्थानीयलाई कु’टपि’ट गरिरहेका बेला सशस्त्र प्रह’री निरीक्षक ईश्वरी दत्त भट्टले रोक्न खोज्दा बोगटीले भट्ट’माथि ढु’ङ्गा प्रहा’र गरी सशस्त्र प्रहरी भट्ट चढे’को मोटरसाईल खोसेर शुक्ला’फाँटाको झलारी पुगेका थिए ।
झलारी बजा’रमा डयु’टीमा रहेका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बोग’टीलाई रोक्न खोज्दा प्रहरी माथि कुटपिटमा उत्रिएका हुन । प्रहरीले बोगटीलाई नियन्त्रणमा लिन खो’ज्दा पाइन्ट, क’ट्टु समेत फुकालेर ना’ङ्गै हिडन थालेपछि स्था’निय बासिन्दा प्रहरी, सशस्त्र प्रह’रीले नियन्त्र’णमा लिएका छन ।
नियन्त्रणमा लिईएका बोटग’टीलाई अहिले इप्रका झलारीको हिरासतमा राखिएको छ । यस अघि समेत बोगटी झै झग’डा गर्ने र कु’टिने अबस्था आए ना’ङ्गै भएर भा’ग्ने गरेको दोधारा’का स्थानिय बासिन्दा’को भनाई रहेको छ । – गोदावरी न्युज बाट
Prevखुर्सानीले मदनलाई बनायो करोडपति, यसरी जोडे डेढ करोडको सम्पत्ति ( भिडियो सहित)
Nextछोरो बितेको १ घण्टा कट्न नपाउँदै आमाको पनि कोरोनाले ज्यान लियो
पुजाले गाली गर्ने सुष्मालाई यसो भनिन्, विगत सम्झिँएर आशु झारिन् (भिडियोसहित)
आज नेपालमा सुनचाँदीको भाउ बढ्यो की घट्यो ? मल्यसहित हेर्नुहोस्…
जन्तीले मदि`रा सेव`न गरेर हंगामा गरेपछि बेहुलीले अस्वी’कार गरिन् बिहे, रित्तै घर फर्किए बेहुला